Lightning Box machine slot Panda Pow iphefumlelwe ngempumelelo franchise movie Kung Fu Panda. Yi yekhasino deposit ibhonasi video slot enikeza ezi- ezahlukeneyo kubadlali. cacileyo, umdlalo features bayo Chinese. Kunye ukuba zibukeke, ngayo kwakhona ilula ukudlala kakhulu. Umdlalo kakhulu enokuxelwa kwangaphambili leyo siyicacisa ngokucacileyyo abafanelekileyo ukuba wabaqalayo. Abadlali bavuzwa kwi ezincinane kodwa rhoqo kulo mdlalo.
Malunga Developer ka Panda Pow:
Wabaseki Lightning Box Imidlalo kwafakwa phezu 20 iminyaka yamava ngokuyila imidlalo ejolise izibalo. e 2004 bebenyuka bona yokufota zabo waqala ukunika kwiindawo zokubeka kwi imboni yezemidlalo i. le yekhasino deposit ibhonasi umdlalo mnikelo yabo yakutshanje.
le yekhasino deposit ibhonasi umdlalo has a umzobo ezinombala obomvu ukuba bawuzalisa kunye iitempile kunye izivatho Orient spiral. Ababhekisi phambili umdlalo uyibandezile jonga ngenene elula ngokungafaniyo nezinye imidlalo Orient desktop zonke ezikhoyo online, leyo eyenza kube ezinokufumaneka ngakumbi. nabo ke imizobo linyuke umsebenzi kwaye ngexesha elinye nezinyanzelisayo inika amava wokudlala mnandi kakhulu. Kukho ekwazi ezintlanu nezintlu ezintathu 25 paylines fixed. Kwakhona uya kufumana imo umdlalo auto umdlalo ekuvumela wenze ubhejo yaphinda kwakhona. Isimboli phezu reel ziquka izikhokeli, lantern, fans ehonjisiweyo, 3 kubudlelwane zegolide, a panda usana kunye neempawu ikhadi standard.
Ezinye iimpawu zale yekhasino deposit ibhonasi umdlalo, zezi zilandelayo:
Wild kunye Wazibhangisa– Lo mdlalo uphawu panda elisebenza bobabini endle ngokunjalo siwachithe. Uphawu panda njengamalalela zonke ezinye iimpawu kwi reel. Ukuba ubona ezintlanu kuzo ngaxeshanye wena avuzwe ijikelezisa free. Wena sethubeni lokuphumelela ukuya ku 20 osebenzisa free zilandelana.
Extra Imiqondiso Wild– Kwiipanda zasendle extra kuqhubeka ukubonakala ngexesha free eluphendula ngeenxa. Bayakwazi kuvela anyplace ngaphandle esondweni 1 kunye nokwandisa amathuba akho yokuwina. Uza kukwazi ukuba retrigger ifitsha kude kube lixesha uyakwazi ukufumana Uchithachitha ezaneleyo panda.
Panda Pow yonke into eya kuba, animations ezinkulu, imithetho elula kwaye hayi ukuba ukulibala amabhaso imali umdla efihliweyo kulo mdlalo. le yekhasino deposit ibhonasi mdlalo nzima bonke leyo eyenza kube lwabasaqalayo lwe-friendly kakhulu.